Imaaradka Carabta oo DF ka dalbatay inay raali gelin ka bixiso lacagtii lagu qabtay Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Imaaradka Carabta oo DF ka dalbatay inay raali gelin ka bixiso lacagtii...
Imaaradka Carabta oo DF ka dalbatay inay raali gelin ka bixiso lacagtii lagu qabtay Muqdisho
Muqdisho (Caasimadda Online) – Iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay cirka isku sii shareertay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa hadda soo baxayo noo jiro isku soo dhawaansho ku aadan inay dowladda Soomaaliya raali gelin siiso dhigeeda Imaaraadka, gaar ahaan falkii Muqdisho ka dhacay ee lagu qabtay ay Imaaraadka sheegtay inay mushaar ahaan usiin rabtay ciidamo ay u tababartay dowladda Soomaaliya.
Ilo ku dhow Wasaarada Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Imaaraadku dalbaday raaligelin laga bixiyo falkii ka dhacay garoonka Muqdisho ee lagula kacay safiirka Imaaraadka.
Bayaan ay shalay soo saartay Wasaarada Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu hordhac u ahaa waanwaan ka dhex bilaabatay labada Dal.
Lacagtii lagala wareegay Imaaraadka ayaa lagu wadaa in dib loogu celiyo safaarada Imaaraadka ee magaalada Muqdisho.
Labada dowladood ayaa waxaa hadda u socdo waanwaan iyadoo rajo laga qabo in lasoo dhameeyo xurgufta ka dhaxeyso labada dowladood.
Khilaafka u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa bilowday kadib markii ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday inay go’aan dhex dhexaadnimo ah ka qaadatay khilaafka siyaasadeed ka dhex curtay dowladaha Carabta.
Dowladda Imaaradka Carabta ayaa tan go’aankaas ay dowladda qaadatay ayaa waxay culeyska saareysay sidii ay Soomaaliya go’aankaas uga noqon laheyd waxaana muuqato inay Soomaaliya xiriir fician la leedahay dalka Qatar.